Injection ကို bovine & က်ဘို့ LHRH-A3 - တရုတ် Ningbo ဒုတိယအဟော်မုန်း
Injection ကို bovine & က်ဘို့ LHRH-A3
Injection ကိုများအတွက်ဟော်မုန်း A3 ဖြင့်ထုတ်လွှ Luteinizing ဟော်မုန်း (LHRH-A3) (ကုန်သွယ်ရေးအမည်: Zaizaiduo) ဤကော်ပိုရေးရှင်း Luteinizing ဟော်မုန်းဟော်မုန်း A3 ဖြင့်ထုတ်လွှများအတွက်ကုန်ကြမ်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အိမ်မှာ GMP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လွန်တော်မူပြီးမှတစ်ခုတည်းသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ [ဖျေါပွခကျြ] ဒီထုတ်ကုန်အဖြူအေးခဲ-အခြောက်လုပ်ကွက်သို့မဟုတ်အမှုန့်သည်။ [ရာထူးအမည်နှင့်အသုံးပြုမှု] Polypeptide ဟော်မုန်းမူးယစ်ဆေး။ ဒါဟာ luteinizing ဟော်မုန်း (LH) နှင့် follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း (FSH), မထွက်ရ maturi secrete ဖို့တိရိစ္ဆာန် anterior pituitary မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ် ...
L ကို uteinizing H ကို ormone R ကို eleasing H ကို ormone တစ်ဦးက3Injection ကိုများအတွက် (LHRH-တစ်ဦးက3)
ဒါက ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည် တစ်ခုတည်းသောထုတ်လုပ်သူ လွန်တော်မူပြီးမှ GMP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် အိမ်မှာ in terms of the raw materials for Luteinizing H ကို ormone R ကို eleasing H ကို ormone s တစ်ဦးက 3.
Polypeptide ဟော်မုန်းမူးယစ်ဆေး။ ဒါဟာ luteinizing ဟော်မုန်း (LH) နှင့်သားအိမ် follicles ၏ရင့်ကျက်ဒီနည်းနဲ့မျိုးဥထွက်မှရာထူးတိုးဖြစ်ပါတယ်မထွက်ရ follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း (FSH), secrete ဖို့တိရိစ္ဆာန် anterior pituitary မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာချက်ချင်း pituitary gland အားဖြင့်ဖန်တီးဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်ပေမယ့်ဟော်မုန်းတွေရဲ့ပေါင်းစပ်လှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်မသာ။ ဒါဟာအထီးတိရစ္ဆာန်များအဘို့ spermatogenesis မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
2. estrum စဉ်အတွင်းကိုယ်ဝန်နှုန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမ;
3. follicles ၏ဆင်းရဲသားကိုရင့်ကျက်, နှောင့်နှေးမျိုးဥထွက်ခြင်းနှင့် follicular cyst ဆက်ဆံ;
5. Corpus luteum ၏ function ကိုခိုင်ခံ့စေ။
1. သားအိမ် function ကို၏ပြန်လည်မြှင့်တင်ရေးနှင့်နွားသငယ်အကြားကာလတို: ပေးပို့ပြီးနောက် 8-18 ရက်အတွင်း5-15μg၏အသားထိုးဆေး,3ရက်ဆက်တိုက်တစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်။
2. တိုးတက်စေူခင်းကိုယ်ဝန်မှုနှုန်း: တစ်။ မိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်း25μg၏အသားထိုးဆေးသိသိသာသာ estrum အတွက်ကိုယ်ဝန်နှုန်းကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်; ခ။ အကြောင်းကိုရက်ပေါင်း 40 ပေးပို့ခြင်း,6ရက်ပတ်လုံးတစ်ခုကြားကာလနှင့်အတူ PG ၏ 0.2mg ၏အသားထိုးဆေး, တနေ့နောက်ထပ်ကြားကာလနှင့်အတူ20μg၏အသားဆေးထိုးပြီးနောက်25μg၏အသားထိုးဆေးသိသာပေးပို့ပြီးနောက် 60 ရက်အတွင်းကိုယ်ဝန်နှုန်းကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
follicular maldevelopment နှင့်နှောင့်နှေးမျိုးဥထွက်၏ 3. ကုသမှု: မိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်းသို့မဟုတ်2နာရီမိတ်လိုက်မတိုင်မီ25-30μg၏အသားထိုးဆေး။
Multi-follicles ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု 4. ကုသမှု:3ရက်ဆက်တိုက်နေ့တိုင်း25μg၏အသားထိုးဆေး။
သားအိမ် cyst ၏ 5. ကုသမှု:5ရက်ဆက်တိုက်နေ့တိုင်း25μg၏အသားဆေးထိုးခြင်းနှင့်ထိုအတောအတွင်းအတွက်အဓိကချို့ယွင်း၏ 100mg ၏အသားထိုးဆေး, ထပ်မဖြစ်အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကချို့ယွင်းသုံးလကိုယ်ဝန်ပြီးနောက်မျိုးစုံကြိမ်ထိုးခံရကြလိမ့်မည်။
II ကို။ porcine မျိုးပွားအတွက်လျှောက်လွှာ
1. estrum အတွက်ကိုယ်ဝန်မှုနှုန်းနှင့်မျိုးစေ့ကြဲ၏အမှိုက်သရိုက်များအရွယ်အစားတိုးတက်စေူခင်း: estrus မျိုးစေ့ကြဲဖို့ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်အဖော်ရှာမတိုင်မီ25-50μg 0-4 နာရီအသားထိုးဆေးထက်ပိုမို2အကြီးအကဲများသည်မျိုးစေ့ကြဲ၏ပျမ်းမျှအမှိုက်သရိုက်များရဲ့အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
အထီးက်ဘို့ 2. အနိမျ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ: 3-5 ရက်ဆက်တိုက်နေ့တိုင်း25μg။
III ကို။ သိုးမျိုးပွားအတွက်လျှောက်လွှာ
ပစ်မှတ်တခြားသောသာမန် estrus စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ဒီထုတ်ကုန်၏5-10μg၏အသားထိုးဆေးကိုချက်ချင်းကောက်ယူကြလိမ့်မည်နှင့်မိတ်လိုက်သည့်တခြားသော estrus ထဲမှာမပါလျှင်, Trinity-ဟော်မုန်း၏ 0.5-1ml နိုင်ပါတယ် (4-6 နာရီအကြာအကောင်အထည်ဖော်ရကြလိမ့်မည် estrus မြှင့်တင်ရန်အသီးအသီးသိုးအတှကျအသုံးပွု) ။ နည်းဥပဒေနောက်တော်သို့လိုက်လျှင်, ဆိတ်များအတွက် Twin မှုနှုန်းသိသိသာသာတိုးပွါးလိမ့်မည်, သိုးများအတွက်အမှိုက်သရိုက်များအရွယ်အစားတိုးပွါးလိမ့်မည်။
IV ။ အခြားပြည်တွင်းတိရစ္ဆာန်များအတွက်လျှောက်လွှာ
ကိုယ်ဝန်မှုနှုန်းနှင့်အမှိုက်သရိုက်များအရွယ်အစားတိုးတက်လာဖို့အဖော်ရှာမတိုင်မီမိတ်လိုက်သို့မဟုတ်နာရီပေါင်းများစွာကာလအတွင်းအသားထိုးဆေးအကောင်အထည်ဖော်: သမင်နှုန်း15μg; ယုန်နှုန်း3-5μg; ခွေးသို့မဟုတ် fox နှုန်း15μg; အသားအရေများအတွက်တိရိစ္ဆာန်နှုန်း5μg။
ရေရှည်နှင့်လျှောက်လွှာမြင့်မားဆေးများပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအကျိုးသက်ရောက်မှု, အမည်ရသိသာ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။
10 ×15μg 10 ×25μg 10 ×50μg 10 ×100μg
Shaded နှင့်လုံ; 20 ℃၏အပူချိန်အောက်မှာသိမ်းဆည်းထား။
ယခင်: Injection ကို bovine & က်ဘို့ LHRH-A2
နောက်တစ်ခု: oxytocin Injection (Pitocin)
Lhrh-A3 Injection ကို bovine များအတွက် & ဝက်
Cloprostenol ဆိုဒီယမ် Injection (PG)
Injection ကိုများအတွက် Pituitary Luteinizing ဟော်မုန်း (LH)